Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Oo Xuska Sannad Guuradda 27aad Ee 18 May 2018 Kaga Hadlay Arrimo Badan | Araweelo News Network | Araweelo News Network
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Oo Xuska Sannad Guuradda 27aad Ee 18 May 2018 Kaga Hadlay Arrimo Badan
“Cadowgayagana waxa aanu u sheegaynaa maanta gacanna waxa aanu ku haynaynaa difaaca dalka, gacanna waxa aanu ugu dabbaal degaynaa qaran-nimadayada Somaliland” Madaxweyne Muuse Biixi.
Hargeysa(ANN)-Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay munaasibada sannad guuradii 27aad ee 18 May, ayaa si kulul uga hadkay faragelinta Soomaaliya, wuxuuna ku hanjabay in Ciidamadda Qaranka Somaliland diyaar u yihiin inay difaacdaan dalkooda.
sidoo kale Madaxweyne Muuse Biixi, wuxuu ka hadlay fadqallooyinka soo noq-noqday ee deegaanka gobolka Sanaag ee Ceel-Afweyn, isagoo sheegay in gacan bir ah lagu qabanayo dadka wada arrimahaa.
Madaxweha oo khudbad dheer oo uu kaga hadlay arrimahaa Iyo kuwo kale saaka ka jeediyay fagaaraha barxada hore ee Madaxtooyadda, Isla markaana si toos ah khudbadiisa looga daawanayay warbaahinta, ayaa ku bilaabay sidan:-
“Ugu horayn, waxaan salaamayaa:
· Waxa aynu ka heshiinay dhammaan colaadihii iyo dhibaatooyinkii Dawladdii Somalia kala dhex-dhigtay Shacabka Gobta ah ee Somaliland.
· Waxa aynu hub ka dhigis u samaynay dhammaan ciidammaddii kala duwanaa ee dalkeena, si ay u noqdaan Ciidan Qaran oo tababaran oo dalkooda difaaca.
· Waxa aynu dib u dhisnay dhammaan haykalkii maamul iyo dawladnimo ee dawlad looga baahnaa. Maantana Somaliland waa Qaran 27 jir-saday oo leh ciid, calan, ciidan, cumlad, cuud iyo cuddud aan la soo hawaysan karin.
· Waxa aynu dib u dhisnay, una qaramaynay dhammaan kaabayaashii dhaqaale ee dalka.
· Waxa aynu yeelanay Dastuur Qaran oo in ka badan 97% Shacabka Jamhuuriyadda Somaliland ku ansixiyeen sannadkii 2001.
· Waxa aynu dib u hirgalinay dhammaan adeegyaddii bulshada, sida waxbarashada, Caafimaadka, Biyaha iyo Kaabayaasha Dhaqaalaha. Waxa ammaan iyo bogaadin u dirayaa dhammaan masuuliyiintii kala duwanaa ee soo gaadhsiiyey adeegyadan heerka maanta ay joogaan.
· Waxa aynu dalkeena ka dhignay dal Dimuqraadi ah, leh Axsaab badan, isla markaan qabsaday doorashooyin xor iyo xalaal ah. Kuwaas oo mararka qaarkood aynu dal ahaan horseed ugu nahay Afrika.
· Waxa aynu soo jiidanay maal-gashi shisheeye iyo saaxiibo dhaqaale xoog-leh ku balaadhinaya, kuna casriyeynaya Dekeddeena Magaalada Berbera.
· Tiirka koowaad ee Siyaasadda Arrimaha Dibeddu waa nabad-ku-wada noolaanshaha iyo daris-wanaaga dalalka Geeska Africa iyo guud ahaan adduunkaba.
· Tiirka labaad, waa in is-kaashi dhaw dalalka darisku ka yeeshaan dhinacyada ammaanka, dhaqaalaha, horumarka iyo is-dhex-galka.
· Tiirka saddexaad, waa ixtiraamka iyo xaq-dhawrka xuquuqda Qaranimo ee dalalka dariska ah iyo guud ahaan Geeska Afrika.
Somaliland Guul – Somaliland Guul